ပွန်ပေ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် ရှေးဟောင်းမြို့ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အီတလီမြို့ အတွက် ပွန်ပေမြို့ ကို ကြည့်ပါ။ အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် ပွန်ပေ (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။
ပွန်ပေ (The city of Pompeii) သည် မြေကြီးအောက်တွင် တစ်ဝက်တစ်ပျက် နစ်မြုပ်နေသာ ခေတ်ဟောင်း ရောမမြို့တော် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ် အီတလီနိုင်ငံ ကမ်ပါးနီးယားဒေသ အတွင်း နေပယ်လ်မြို့ အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ အေဒီ ၇၉ ခုနှစ်က ဗီဆူးဗီးယပ်မီးတောင် ပေါက်ကွဲရာမှ ပွန်ပေမြို့နှင့် ၎င်း၏ ညီအစ်မမြို့ဖြစ်သော ဟာကျူလေနီယမ်မြို့တို့ ပျက်စီးပြီး မြေအောက်တွင် နစ်မြုပ်သွားခဲ့သည်။ မီးတောင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ပွန်ပေကို ၄ မီတာမှ ၆ မီတာ အထိ ထူထပ်သော မီးတောင်ပြာများအတွင်းတွင် ပွန်ပေကို နစ်မြုပ်သွားစေသည်။ ထိုမြို့သည် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်မျှ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး ၁၅၉၉ ခုနှစ်တွင် မတော်တဆ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြို့ဟောင်းကို တူးဖော်ခြင်းဖြင့် ရိုမန်အင်ပိုင်ယာ ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်နေသော အချိန်က မြို့ပြရှိ လူနေမှု ဘဝကို အသေးစိတ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိခွင့် ရခဲ့သည်။
ပွန်ပေမြို့၊ နေပယ်လ် စီရင်စု၊ ကမ်ပါးနီးယားဒေသ၊ အီတလီနိုင်ငံ
၆၄ မှ ၆၇ ha (၁၇၀ ဧက)
ဘီစီ ၆-၇ ရာစု
ပွန်ပေ၊ ဟာကျူလေနီယမ်နှင့် တိုရန်အန်နျူဇီယာတာ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဧရိယာ
၁၉၉၇ (၂၁ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး)
ပွန်ပေသည် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်အထိ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်လည်ပတ်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်တွင် ယူနက်စကိုက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အီတလီနိုင်ငံရှိ ခရီးသွားအများဆုံး လာရောက်လည်ပတ်လေ့ ရှိသည့် နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ကာ လူပေါင်း ၂ သန်းခွဲခန့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။
↑ Dossier Musei 2008 (in Italian)။ Touring Club Italiano။ 18 March 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ September 30, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikimedia Commons ရှိ ပွန်ပေ နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာများ
ရှေးဟောင်းသမိုင်း စွယ်စုံကျမ်း - ပွန်ပေ
Forum of Pompeii Digital Media Archive Archived4October 2008 at the Wayback Machine. (creative commons-licensed photos, laser scans, panoramas), data fromaUniversity of Ferrara/CyArk research partnership
Romano-Campanian Wall-Painting (English, Italian, Spanish and French introduction) Archived7March 2011 at the Wayback Machine. mainly focusing on wall-paintings from Pompeian houses and villas
N. Purcell, R. Talbert, T. Elliott, S. Gillies။ Places: 433032 (Pompeii)။ Pleiades။ March 8, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ပွန်ပေ: အချိန်တွေထဲမှာ အရည်ခဲနေတဲ့ လျှို့ဝှက်တဲ့လူများအကြောင်း
ဂူဂယ်မြေပုံ - ကောင်းကင်မြေပုံများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပွန်ပေ&oldid=735324" မှ ရယူရန်
၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။